Deflation | अर्थव्यवस्था वित्त
क्लौडी क्यासलहरू | | संकट, मौद्रिक राजनीति
मुद्रास्फीति कस्तो हुन्छ को विपरित हो। यस लेखले यो को बारे मा व्याख्या गर्न को लागी कोशिश गर्नेछ, किन यो अवस्थित छ, पृथक्करण को फाइदाहरु र हानिहरु। यसको उल्टो विपरीतको साथ जुन हामी अधिक परिचित छौं, मुद्रास्फीति। यदि मुद्रास्फीति मूल्यमा सामान्य वृद्धि हो भने, गिरावट मूल्य मा सामान्य गिरावट छ। जे होस्, किन कहिलेकाँही एक हुन्छ, कहिलेकाहिँ अर्को हुन्छ, र किन यो आधुनिक समयमा उदाहरणका लागि भइरहेको छ?
के त्यहाँबाट केही फाइदा पाउने कुनै तरिका छ? सत्य यो हो कि यो विशेष अवसरहरूमा हुन्छ। यो सामान्य घटना होईन र समृद्ध भविष्यको आशा गर्दैन आर्थिक हिसाबले। यो सामान्यतया आउँछ जब आपूर्ति माग भन्दा बढि छ, कि जब, खपत मर्दै छ। सामान वा उत्पादनहरूमा यो अधिक उत्पादन मूल्यको सामान्य गिरावटसँगै आउँछ, र यो जहाँबाट डिफेलेसन शुरू हुन्छ, विशेष गरी यदि यो खण्ड धेरै बिभिन्न क्षेत्रहरूमा देखा पर्दछ।
1 पृथक्करण भनेको के हो?
2 ईतिहास भर दफनका उदाहरण
3 स्पेनिश अर्थव्यवस्थाको लागि नतिजाहरू
पृथक्करण भनेको के हो?
Deflation पनि प्रसिद्ध मुद्रास्फीति को रूप मा परिचित छ। सामान्यतया आपूर्ति मा एक अधिक द्वारा वातानुकूलित छ कि "बल" खरिद गर्न सकिन्छ कि सामान को मूल्यहरु कम समाप्त गर्न। यो ओवरसप्ली मानिसद्वारा सामानहरू प्राप्त गर्न असमर्थता, वा प्रोत्साहन तथा / वा प्रेरणाको अभावले तिनीहरूलाई प्राप्त गर्न कन्डिसन हुन सक्छ। यो सामान्यतया आर्थिक स with्कटसँग सम्बन्धित छ, र यसको राम्रो उदाहरणहरू १ 1930 s० को दशकमा वा २०० C को वित्तीय संकटको समयमा चलिरहेको ठूलो उदासीनता हुनेछन्। यी अवस्थाहरूमा कम्पनीहरूले उनीहरूको उत्पादनबाट छुटकारा पाउन र निक्षेप स accum्कलन नगर्न चाहान्छन्। कम मूल्यहरू समाप्त गर्ने एउटा तरिका जुन उनीहरूको नाफा मार्जिनहरू कम हुन्छन्।
समाजमा प्रभाव आमतौर मा धन को वितरण र सामाजिक असमानता को रूप मा अंक लाई प्रभावित गर्दछ। यो घटना सामान्यतया यो तथ्यबाट आउँदछ कि लेनदारहरूले torsण लिनेहरू भन्दा बढी फाइदा लिन्छन्, जसको दायित्व भुक्तान गर्न जारी छ।
कारणहरू, हामीले देख्यौं, प्रायः दुई हुन्, आपूर्तिमा बढि वा मागको अभाव। यसका धेरै कम फाइदाहरू छन्, र केही फाइदाहरू पनि छन्, जुन हामी तल हेर्दै जाँदैछौं।
अस्ट्रियन स्कूल अर्थशास्त्रीहरूको तर्क छ कि डिफिलेशनको सकारात्मक प्रभाव छ। अहिलेको लागि फेला पार्न सक्ने एकमात्र फाइदा भनेको त्यो हो मूल्य घटाएर उपभोक्ताहरूको क्रय शक्ति बढ्नेछखास गरी बचत भएकाहरूको। यद्यपि यस हेटेरोडॉक्स सोचाइले बदल्छ कि डिफेलेसन छोटो अवधिमा अर्थव्यवस्था को लागी एक समस्या पैदा गर्दछ।
Deflation अर्थव्यवस्था को लागी नकारात्मक प्रभावहरु को एक विस्तृत श्रृंखला छ कि हामी तल हेर्नेछौं। यद्यपि यसबाट आउने सबै तथ्यहरू र घटनाहरू पछाडि, विकृतिकरणको खतरा एउटा विकराल सर्कलमा फस्न सजिलोमा पछाडि पर्छ र यसबाट बाहिर निस्कन कत्ति गाह्रो छ।
आर्थिक गतिविधि कम छ।
माग कम छ, या त अधिक आपूर्ति वा क्रय शक्तिको कारण। भन्दा बढि उत्पादनहरू स्वास्थ्य आवश्यक हुनेछ।
कम्पनीहरूमा नाफा मार्जिनमा कमी।
यसले बेरोजगारीमा असर गर्छ जब यो बढ्दो समाप्त हुन्छ।
आर्थिक अनिश्चितता उच्च स्तरमा पुग्छ।
वास्तविक ब्याज दरहरूमा वृद्धि सिर्जना गर्नुहोस्।
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ कि यो गाह्रो दुष्चक्रलाई रोक्न कत्ति गाह्रो छ। यदि माग कम गरियो, र मार्जिन घट्यो भने, बेरोजगारी बढ्दै जान्छ। बदलेमा, बेरोजगारी बढ्यो भने, माग गर्न सक्छन् र पक्कै पतन जारी हुनेछ।
ईतिहास भर दफनका उदाहरण
हामीले देख्यौं कि सन् १ 1930 s० को दशकमा र वित्तीय सन् १ in s० को बिरोधमा आएका कठिन सes्कटहरू पछि डिफेलेसन कसरी प्रभावित भयो। तथापि, र यद्यपि यो बरु एक पृथक र दुर्लभ घटना भएको छ पछिल्ला शताब्दी भरि हामी ती देशहरुका भोगी रहेका उदाहरणहरु पाउन सक्छौं।
अर्थतन्त्रको "जापानीकरण" कहिलेकाँही जापानको सेन्ट्रल बैंकको व्यवहार अनुकरण गरेर कम ब्याज दरमा ECB को प्रतिक्रिया व्याख्या गर्न भनिन्छ। कम ब्याज दरमा स्थिरताको यो अवधि एक १ 90 25 ० को दशकमा शुरू भएको र आज पनि जारी रहेको प्रतिस्पर्धाको साथ आएको छ। संचयी मूल्य ड्रप पहिले नै -२%% छ।
हालको स With्कटको साथ, पृथक्करणको प्रकोप अझ प्रबल रूपमा देखा पर्छ, किनकि यसको उपस्थिति पहिले नै डराइएको थियो। पछिल्ला बर्षहरूमा विकसित देशहरूले उनीहरूको ब्याज दरलाई घटाउँदै आएका छन् र हामीले नकारात्मक दरको बन्धनहरू अधिक र अधिक पटक देख्यौं जुन वर्तमान सामान्यता पहिले अकल्पनीय छ। उदाहरणको लागि, यो गम्भीर स्वास्थ्य संकट सुरु हुनुभन्दा एक वर्ष अघि, फेब्रुअरी २०१ in मा, कुल developed developed विकसित देशहरूले आफ्नो ब्याज दरहरू पहिले नै घटाइरहेका थिए। Deflation एक वास्तविक खतरा हो जुन समाधान गर्न धेरै गाह्रो छ र यसलाई रोक्नको लागि प्रेरणा एकदम कडा छ।
स्पेनिश अर्थव्यवस्थाको लागि नतिजाहरू
स्पेनको मामलामा गिरावट आउने झन् बढी नकारात्मक असर छ। वास्तवमा जुलाईको यस महिनाको लागि सीपीआई -०..0% थियो इंटरेन्युअल दर -०..0% मा रहनेछ, तर अगस्तले ०.०% को बृद्धिसँग अन्तर-दरलाई ०.० %मा राख्नका लागि छ। स्पेनिश अर्थव्यवस्थाको प्रतिस्पर्धाको कस्तो परिणाम हुन्छ? दीर्घकालीन र व्यापक मूल्य गिरावट उपभोक्ताहरूको लागि अधिक खरीद शक्ति प्रस्ताव गर्न सक्दछ। यद्यपि कम्पनीहरूका लागि नाफा मार्जिन घटाइन्छ।
यदि कर्मचारीहरूको लागत कायम गरीएको छ र बेरोजगारी ठूलो छ, स्पेनमा जस्तो, विस्फोटक ककटेल धेरै खतरनाक छ, किनकि ती दुई घटनाहरू हुन् जसले एक अर्कालाई खुवाउँछन्। एकातिर, कम्पनीहरू प्रतिस्पर्धी रहनको लागि आफ्नो मुनाफा सीमित गर्न बाध्य छन्। यसले उनीहरूलाई वांछित व्यावसायिक लाभहरू प्राप्त गर्नबाट रोक्छ, साथै लगानी गर्न तरलता राख्छ। यो फ्रिज गर्ने वा मजदुरहरूको ज्याला कम गर्न सक्दछ, तरलताको अभावले खपत थप डूब। यदि यसमा प्रति परिवार बचतको अभाव थपिएको छ भने, यो सम्भव छ कि देशको आन्तरिक खपतको गम्भीर संकुचन बढ्न सक्दछ। निर्यातमा आएको गिरावट र स debt्कटको कारणले सार्वजनिक ,णमा वृद्धि भएपछि डिफेलेसनको स्प्याटरमा वर्षौं बोनन्जा हुन सक्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: अर्थव्यवस्था वित्त » सामान्य अर्थव्यवस्था » संकट » गिरावट
यो संसारमा के हुँदैछ र कसरी स still्कट अझै पनि सुस्त छ, विशेष गरी अहिले, संक्रमणको यो नयाँ लहरसँग धेरै कुरा गर्नुपर्दछ।
नवीकरण गर्न जवाफ दिनुहोस्
बैंक स्टेटमेन्ट के हो